I-infographic: Izindlela Zokuxhumana Zikuthonya Kanjani Ukuphila Kwethu | Martech Zone
NgoLwesithathu, Okthoba 28, 2020 NgoLwesithathu, ngoMashi 24, 2021 UTom Siani
Namuhla amapulatifomu ezokuxhumana sibe neqhaza elibalulekile empilweni yethu. Abantu abayizigidigidi emhlabeni wonke bayazisebenzisa ukuxhumana, ukuzijabulisa, ukuzijabulisa, ukufinyelela izindaba, ukucinga umkhiqizo / insizakalo, isitolo, njll.
Iminyaka yakho noma isizinda sakho akubalulekile. Ukuxhumana nabantu kuzothinta kakhulu inqubo yakho yansuku zonke. Ungafinyelela kubantu abanezintshisakalo ezifanayo nezakho futhi wakhe ubungani obuhlala isikhathi eside ngisho noma ungaziwa.
Ungazwelana nabanye abantu abaningi emhlabeni wonke ngokusebenzisa i-hashtag efanayo. Noma ungeke ubakhombise isithombe sakho sangempela, kepha bazoxhumana nokuqukethwe kwakho.
Bonke abantu abavela ezizindeni ezahlukahlukene zezomnotho namasiko basebenzisa ukuxhumana nomphakathi ngenkuthalo. Eqinisweni, kunzima ukucabanga usuku ngaphandle kwezinkundla zokuxhumana.
Konke lokhu bekungumphumela nje wezokuxhumana kubantu. Abezombusazwe, ohulumeni, abanikazi bendabuko bemidiya, izinkanyezi, osaziwayo nabo bonke abantu abanethonya nabo basakaza imiyalezo yabo besebenzisa la manethiwekhi.
Abantu abaningi bathembela ezindabeni zezinkundla zokuxhumana ngaphezu kwezinhlaka zezindaba zikahulumeni ngoba bacabanga ukuthi abasebenzisi bezenhlalo bathembekile.
Cishe asikho isihloko esibalulekile emhlabeni esingakhulunywa ngeziteshi zomphakathi. Ngakho-ke amanethiwekhi aku-inthanethi nokuqukethwe okwenziwe ngumsebenzisi ziqukethe ingxenye enkulu yezindaba zansuku zonke emhlabeni.
Ngakolunye uhlangothi, amabhizinisi nawo asebenzisa izinsizakalo zenhlalo ukusizakala ngalokhu kufinyelela okuhle emphakathini. Izinhloso zabo eziphezulu imvamisa ukuqwashisa ngomkhiqizo, ukukhiqiza okuholayo, ukushayela ithrafikhi kumakhasi ewebhu, ukukhula kokuthengisa, nokwenza ngcono izinsizakalo zamakhasimende.
Ngenxa yalokho, ukumaketha ngokusebenzisa amanethiwekhi omphakathi sekuyinto eza kuqala kubaninimabhizinisi nabakhangisi abaningi. Sekwakhiwe amathuba amaningi emisebenzi kubakhangisi, abenzi bokuqukethwe, abaphathi bezinkundla zokuxhumana, abaklami bezithombe, njll kule minyaka eyishumi edlule.
Ngenhlanhla, le misebenzi ihlupheke kakhulu kunanoma yimuphi omunye umkhakha ngesikhathi kuqhamuka i-COVID-19. Amandla okwenza ukumaketha kwezokuxhumana nabantu ukude kukhuthaze ama-brand ukuthi anikeze abathengisi abakude.
Ngabantu abasebenzisa i-inthanethi namanethiwekhi okuxhumana nomphakathi kakhulu kunakuqala, amathuba amasha ahlanganisiwe wemikhiqizo ukumaketha imikhiqizo / izinsiza zabo.
Lapho befuna umkhiqizo, ama-54% abantu baphendukela ezinkundleni zokuxhumana ocwaningweni lwabo. Ama-49% wamakhasimende asekela ukuthenga kwawo kuzincomo zabathonya babezindaba zenhlalo.
Amabhizinisi amancane angasebenzisa ikakhulukazi leli thuba ukwenza imikhankaso eku-inthanethi. Lokhu kuzosebenza kahle futhi kungabizi kakhulu kubo futhi kwandise abalandeli babo futhi kuqinise umugqa wabo ophansi.
Ngamafuphi, ithonya lezokuxhumana ezimpilweni zethu libalulekile. Ngakho-ke, ithimba lethu ku I-Socialtradia uthathe isinqumo sokufingqa futhi akhombise imininingwane ebaluleke kakhulu kulokhu njenge-infographic.
Akunandaba ukuthi ungumsebenzisi ovamile noma umakethi, sincoma ukuthi ubheke le datha ukwazi ukubaluleka kokuxhumana nabantu.
Tags: ukuhola isizukulwanezandulaithonya lokuthengaimithombo yezokuxhumana infographicamapulatifomu ezokuxhumanaizibalo zokuxhumana nabantuithonya lokuxhumana nabantuizibalo zokuxhumana nabantuezokuxhumanaihlumela emphakathiniTikTokokuqukethwe okwenziwe umsebenzisi